Diso ianao, ireto misy antony 4 mahatonga ny media sosialy hisy fiantraikany amin'ny SEO | Martech Zone
Diso ianao, ireto misy antony 4 mahatonga ny SEO eo amin'ny media sosialy
Alakamisy Janoary 8, 2015 Douglas Karr
Azontsika atao ve ny mametraka an'io adihevitra io? Toa ahy fa misy matihanina sasany any izay manao vava ratsy amin'ny valan-tserasera nefa tsy azony tsara ny vokatr'izany. Ny sosialy dia fomba fampiroboroboana izay manangana fifandraisana misy eo amin'ny marika ary koa manome anao fahalalahana amin'ny mpihaino marobe kokoa. Tsy te hampivondrona azy rehetra aho, fa ny ankamaroan'ny tabataba dia avy amin'ireo matihanina SEO - izay tsy maniry hizara ny tetibola amin'ny media sosialy. Mampihomehy, manohitra tena izy ireo.
Raha ny marina dia ohatra lavorary ity lahatsoratra ity. Manana fampandrenesana ara-tsosialy manerana ny tranonkala handefa mailaka aminay aho rehefa misy manonona manokana momba ireo mpivarotra, teny ary teknolojia hahafahanay manoratra momba azy ireo. Nojereko ireo tranokala ireo ary matetika no natolotro ireo mpanaraka anay izany. Amin'ity tranga ity dia tsy hita tao amin'ny iray amin'ireo fampandrenesana ireo ny sary eto ambany. Saingy teo am-pamakiana lahatsoratra iray hafa tao amin'ny tranokala iray aho, dia naseho ny fizahana ny infographic etsy ambany. Novakiako ilay sary avy eo ary noheveriko fa tsara izany. Niverina tany amin'ny Google aho avy eo mba hikaroka ny loharanom-baovao Narotsaka SMO, ary nahita ny sary, Inona no fiantraikan'ny SEO sy ny haino aman-jery sosialy eo amin'ny laharan'ny tranokalano?.
Noho izany, ny ezaka ara-tsosialy nataon'i Submitedge SMO hampiroborobo ny infografika ankolaka dia nahatonga ahy hampiroborobo azy ireo ary manome backlink amin'ny pejin'izy ireo amin'ny lohahevitra iray manokana amin'ny bailiwick-ny. Boom! Raha tsy nizara ny ezak'izy ireo tamin'ny media sosialy izy ireo, dia tsy ho hitako mihitsy! Tsy lazaina intsony ny zava-misy fa raha TSY nilahatra tamin'ny fe-potoana mifandraika amin'ity sary ity izy ireo dia tsy misy fomba hafa hahitako azy ireo.
Miankina tanteraka amin'ny SEO sy ny haino aman-jery sosialy ny laharan'ny tranokalanao. Ireo lafiny roa ireo dia toy ny tongotra roa manampy ny tranokala handroso tsikelikely. Na izany aza, ireo tondro voalaza etsy ambany dia hampahafantatra anao ny tombotsoan'ny Media sosialy sy ny SEO eo amin'ny laharanao.
Inona no fiantraikan'ny SEO sy ny haino aman-jery sosialy eo amin'ny laharan'ny tranokalano?
Rohy mety - ny ohatra nataoko etsy ambony dia ny porofo tonga lafatra fa mandeha io. Ny fanaparitahana an'izao tontolo izao dia mampiroborobo ny atiny ho an'ny mpihaino marobe kokoa, mampitombo ny fahafaha-mizara ny hafa. Ary raha infografika io dia mety nampitombo ny fahafahanao nanao an'izany!
Personalization - Tsy mbola nieritreritra an'izany aho fa satria ny valin'ny karoka dia natokana ho an'izay niditra tao amin'ny Google, ary natao ho an'ny olona rehetra tsy misy, dia miovaova ny valiny azo atolotra ny mpikaroka tsirairay. Ireo mpampiasa miasa ara-tsosialy dia manangana mombamomba azy manokana ary ireo valiny ireo dia afaka mifanandrify amin'ny ezaka ataonao - manome anao fahitana mitombo sy tena voafaritra tsara.
Search Volume Query - Averiko indray, ny fivoahana any amin'ny tontolon'ny fiarahamonina dia manamafy ny fahamendrehanao, ny fahefana ary ny maha-olona anao. Atombohy ny hamoaka ny sary famantarana anao na ny tarehinao amin'ny mpihaino marobe ary ny fankatoavana dia hitarika anao ho amin'ny mpividy. Ohatra iray lavorary ity bilaogy ity sy ny vatiko ratsy tarehy! Izany no mahatonga ny tarehiko hatraiza hatraiza - na tianao izany na tsia;).
Famantarana marika - Miaraka amin'ny fanovana algorithm vao haingana sy ny fandrosoana amin'ny algorithm Google, mino aho fa maro ny pro SEO an-tsekoly taloha no manambany fatratra ny fiantraikan'ny citation amin'ny fanamarinana ny maha-zava-dehibe ny rohy ary; farany, laharana. Ny anaranao, ny anaran'ny vokatra, ny anaran'ny mpiasa, ny adiresy ary ny nomeraon-telefaonao dia singa data tsy mitovy. Ny famoahana azy ireo any amin'ny tranonkala sosialy rehetra dia manamarina ny fisianao sy ny fahefanao.
Mahaliana ahy ny manaparitaka votoaty sy miasa ireo matihanina amin'ny fikarohana maoderina mba hampisehoana an'io atiny io amin'ny tranokalam-baovao azo sy tompony. Ahoana no anaovany an'izany? Matetika amin'ny alàlan'ny tetika fifandraisam-bahoaka. Eritrereto izany… mampiasa ezaka ara-tsosialy izy ireo mba hampitomboana ny fahafaha-mamorona rohy amin'ny atiny voasoratra manokana na zarain'ny tranonkala manan-kery. Hmmm… tsy azo atao izany amin'ny alàlan'ny media sosialy? Eny, eny.
Tags: misy fiantraikany eo amin'ny fiaraha-moninafikarohana Optimizationtetikady marketing marketingfilaharan'ny fikarohanafikarohana vs sosialySEOseo sy sosialypaikady seoseo vs sosialysosialy sy fikarohanasosialy sy seofiantraikan'ny sosialypaikadin'ny media sosialypaikady sosialysosialy mifanohitra amin'ny seososialy vs seosubmitedge smo
Fironana teknolojia 3 izay tokony hijeren'ny mpivarotra amin'ny 2015
Notablist: aingam-panahy endrika sy fikarohana ifaninanana ho an'ireo mpivarotra mailaka
8 Jan 2015 amin'ny 5:17 PM
Tsara Doug. Izany dia nilaza, heveriko fa mampifangaro fomba fijery roa samy hafa ianao amin'ny SEO re sosialy (ary fantatro fa tena tsy ianao fa bilaogy izany, ka ndao hiady hevitra. Fa inona koa no ilain'izy ireo?):
1. Ny hetsika ara-tsosialy dia mety hitarika amin'ny zavatra izay laharam-pahamehana
2. Ny hetsika ara-tsosialy dia "laharam-pahamehana"
Miombon-kevitra amin'ny # 1 aho. Tsy miombon-kevitra amin'ny # 2 aho afa-tsy ny hetsika Google+ faran'izay mafy.
8 Jan 2015 amin'ny 5:23 PM
Manaiky tanteraka Andrew! Tokony ho nataoko mazava kokoa izany tamin'ny lahatsoratro. IMO, raha tsy miasa amin'ny ezaka ara-tsosialy ianao dia vao mainka mihasarotra izany. IMO dia mila mahay tsara ianareo roa.
9 Jan 2015 amin'ny 1:51 PM
Tena tompon'ny clickbait tokoa ianao 🙂
9 Jan 2015 amin'ny 4:35 PM
Ny marina tsy tanjoko fa ho raisiko!